Banky BNI Hanampy ny olom-pirenena hanangana orinasa ho an’ny tenany
Hanampy ny olona hanangana orinasa ho an’ny tenany ny banky BNI Madagascar hahafahana miady amin’ny fahantrana. Amin’ny alalan’ilay tolotra vaovao KRED no hanatanterahan’izy ireo izany eo ambany fiahian’ny CSBF sy ny banky foibe.
Raha araka ny fanadihadiana nataon’izy ireo, ny resa-bola no sakana goavana tsy hahafahan’ny olom-pirenena manangana orinasa ho an’ny tenany. Hatreto, vao ny 12 %-n’ny Malagasy no manana kaonty any amin’ny banky raha ny 21 % kosa no miara-miasa amin’ireo mpampindram-bola madinika. Vokany, tafakatra 2 tapitrisa mahery ankehitriny ireo orinasa tsy ara-dalàna eto amintsika mampiasa olona mihoatra ny 3 tapitrisa. Miisa 177.000 kosa ireo orinasa ara-dalàna izay vitsy raha oharina amin’izy ireo. Hamaha izany olana goavana izany ny KRED. Tsy manana birao izy ireo fa eny an-tokantranon’ireo mpanjifa sy eny an-dalana ny biraony, fampindramam-bola tsy hanavahana na iza na iza. 1 tapitrisa Ar no vola farany ambany azon’izy ireo omena. Anisan’ny jereny voalohany ny hatsaran’ilay tetikasa, ny fahavononan’ilay olona hihoitra amin’ny fiainana izay vao ny antoka.